မြန်မာ ရိုဟင်ဂျာ စာကြည့်တိုက်: ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ၏ ၂၀၁၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၉)ရက် နေ့စွဲပါ ကြောညာချက်အား သဘောထား ကန့်ကွက်လွှာ
ရခိုင်တိုင်းရင်းသားများ တိုးတက်ရေးပါတီ၏ ၂၀၁၁ ခုနှစ် အောက်တိုဘာလ (၉)ရက် နေ့စွဲပါ ကြောညာချက်အား သဘောထား ကန့်ကွက်လွှာ
ပြသာနာ၏ မူလရင်းဇစ်မြစ်မှာ အယူဝါဒကျဉ်းမြောင်းသော
ရခိုင်အမျိုးသားရေးဝါဒီများ၏ သမိုင်းကြောင်း အမှန်ကို မသိချင်ယောင်ဆောင်
အမှန်တရားကို လက်မခံလိုစိတ်ကြောင့် ဟိုးရှေးပဝေသဏီကတည်းက အတူတကွ
လက်တွဲနေထိုင်လာခဲ့သော ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများအား ကြောက်စိတ်၊သံသယစိတ်ဖြင်
ဤနေရာတွင် Arakan ၏ မူလအစနှင့် ပတ်သက်၍ မငြင်းခုံလိုပါ…မည်သို့ပင် ဆိုစေ
ကမ္ဘာမြေကြီး၏ အစိတ်အပိုင်း တစ်ခုသာဖြစ်သည်။အမှန်တရားကို လက်ခံရန် ပါမောက္ခ
ပညာတက်ကြီးဖြစ်ရန်မလိုပါ။ ဗုဒ္ဓ၏ အဆုံးအမကို တစ်သွေမတိန်း
လိုက်နာသူ၊လူသားကောင်း တစ်ယောက်ဖြစ်လျှင် ဤအမှန်တရားကို လက်ခံရန်
ခက်ခဲမည်မဟုတ်ပါ။ုအချုပ်အားဖြင့် Arakan တွင် Rohingya လူမျိုးများ
ရခိုင်လူမျိုးများထက် ရာစုနှစ်များစွာ စော၍ ရှိနေသည်ကို
….ရခိုင်လူမျိုးများရှေး ပဝေသဏီကပင် နေထိုင်လာခဲ့သော ရခိုင်မြေကို
လုယူလိုသူ ဘင်္ဂလီလူမျိုးတစ်စုသည် အကြမ်းဖက်နည်း၊အနုနညး၊၀ါဒဖြန့်ချီနည်း
အစရှိသည့် နည်းပေါင်းစုံဖြင့် ကြိုးစားလာခဲ့သည်မှာ နှစ်ပေါင်းများစွာ
ကြာမြင်ခဲ့ပြီဖြစ်သည်။ ရခိုင်နာမည် ဖျောက်ဖျက်လိုသည့်
နိုင်ငံတော် ငြိမ်ဝပ်ပိပြားမှုတည်းဆောက်ရေးအဖွဲ့ လက်ထက်တွင် ထုတ်ဝေသော
“သာသနာရောင်ဝါထွန်းစေဖို့” စာအုပ် စာမျက်နှာ ၆၅ အရ မူဆလင်များသည်
နှစ်ပေါင်း ၁၀၀၀၊ ၁၂၀၀ ကျော်ကပင် အခြေချ နေထိုင်လာခဲ့သူများဖြစ်သည်။
ကိုအားလုံးသောသမိုင်းပညာရှင်များ လက်ခံကြသည် အတိုင်း အာရပ်ကုန်သည်များသည်
ရခိုင်ကမ်းရိုးတန်း၊တနင်္သာရီကမ်းရိုးတန်းမှ တဆင့် မလေးရှား၊
အင်ဒိုနီးရှား စသည့်နိုင်ငံများသို့ ရောက်ရှိ အခြေချခဲ့သည်။
Arakan မြေမှာ ရှေးပဝေသဏီ ကတည်းက နေထိုင်လာခဲ့ကြတာ ရခိုင်တွေ စောသလား…?
ရိုဟင်ဂျာတွေက စောသလား သမိုင်းအထောက်အထားနဲ့တင်ပြပါမည်။
၁၆ ရာစုတွင် ရေးသော “ဟာနီဖါ နှင့် ခိုင်ယာဖူရီ” စာအုပ်တွင် စာရေးဆရာ Shah
Barid Khan က ယ္ခုမောင်တောခရိုင်၊မောင်တောမြို့ လဘောစားရွာ(Arabshah Para)
သို့ AD ၆၈၀-ခုနှစ်တွင် Mohammed Ali ၏သား Mohammed Hanif သည် Karbala
စစ်ပွဲအပြီး သူ၏ ရဲဘော်ရဲဖက်များနှင့် ရောက်ရှိခဲ့သည်။ထိုအချိန်တွင်
Queen ခိုင်ယာဖူရီသည် မေယုတောင်တန်း တလျှောက် လုယက်တိုက်ခိုက်မှုများ
နှင့် အုပ်စိုးနေချိန်ဖြစ်သည်။ Mohammed Hanif သည် ထို Queen ကို
တိုက်ခိုက်သိမ်းယူပြီး လက်ထက်ယူခဲ့သည်။ထို့ကြောင့် Kaiyapuri နှင့်တကွ
သူမ၏ အခြေအရံများသည် အစ္စလာမ်သာသာကို ခံယူပြီး အေးချမ်းစွာ
နေထိုင်လာခဲ့သည်။ ယ္ခုထက်တိုင် ထိုမေယုတောင်ကြော တစ်ဝိုက်တွင် Hanifa
Tonki နှင့် Kayapuri Tonki ဟူ၍ အထင်အရှား တွေ့မြင်နိုင်ပါသည်။
အချုပ်ဆိုရလျှင် ယနေ့ ရိုဟင်ဂျာ၏ မူလအစသည် ထိုဖြစ်ရပ်မှ
တစ်ဖန် အေဒီ (ရ၈၈-ခု )မဟာထိုင် စန္ဒယား မင်းကြီးလက်ထပ်တွင် အာရပ်ကုန်သည်
သင်္ဘောများ ရမ်းဗြဲကျွန်း အနီးတွင် ပျက်သွားရာမှ အကူအညီတောင်းလာသော
အာရပ်များကို အာရ်ကန်၏ တစ်ခြားနေရာ မြို့ရွာများတွင် နေရာချပေးခဲ့သည်။
ဤသည် မှာ ရိုဟင်ဂျာများ ရေးသော သမိုင်းအထောက်အထားများမှ
ကောက်ယူခြင်းမဟုတ် (၁၉၅၇-ခုနှစ် နှင့် ၁၈၇၉-ခုနှစ်) တွင် ထုတ်ဝေခဲ့သော
Burma Gazetteers(Akyab District) နှင့် British Burma Gazetteers တို့မှ
အေဒီ ၁၄၃၀ ခုနှစ်တွင် ဗိုလ်ချုပ် ၀လီခန် နှင့်ပါလာသော စစ်သည်
ငါးသောင်း(Bangladesh District Gazatteers,p-63)၊ ဗိုလ်ချုပ်
စန္ဒွီခန်နှင့် ပါလာသော စစ်သည်များ(Journal of Burma Research Society
No.2,p-493) သည် ရာစုနှစ် အဆက်ဆက် Arakan ကိုအုပ်ချုပ်
လာခဲ့သည်။ဤသည်များမှာ များစွာသော သမိုင်းအထောက် အထားများမှ အချို့သာ
သမိုင်းဆရာ Morris Collis ၏ အဆိုအရ တိဗက်-မြန်မာ အနွယ်ဝင်များသည် Arakan
ကို India မှ ခွဲထုတ်၍ ဝေသာလီခေတ် နေထိုင်သူများနှင့် ရောထွေးသွားခဲ့ရာမှ
Indo-Mongoloid ဟုခေါ်သော ရခိုင် လူမျိုးဖြစ်ပေါ်လာခဲ့သည်။ ဤအဖြစ်အပျက်မှာ(
AD-၉၅၇) ခုနှစ်တွင် ဖြစ်ခဲ့သည်။
အထက်ပါ သမိုင်းထောက်အထားများကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့် Arakan တွင်
ရှေးပဝေသဏီကပင် နေထိုင်လာခဲ့ကြသူများမှာ ရခိုင်များလား…?
ရိုဟင်ဂျာများလား…? ရခိုင် နှင့် ရိုဟင်ဂျာ နှစ်ခုစလုံးများလား
ထို့ကြောင့် နှစ်ပေါင်းများစွာကပင် ရခိုင်လူမျိုးများထက်စော၍ Arakan တွင်
ရောက်ရှိ အခြေချ နေထိုင်လာခဲ့သော ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများသည် မိမိတို့
ဘိုးဘွားစဉ်ဆက် နေထိုင်ကျက်စားရာ Arakan ကို Arakan ဟုသုံးခြင်းသည်
အလွဲသုံးစားခြင်း မဟုတ်၊လုယူခြင်းလဲ မဟုတ်၊နာမည် ဖျောက်ဖျက်လိုခြင်းလဲ
မဟုတ်ပါ။ ရက်စက်သော စစ်အစိုးရ အဆက်ဆက်၊အယူဝါဒ ကျဉ်းမြောင်းသော လူမျိုးရေး
၀ါဒီများ၏ ကိုယ်ကျိုးဖက် လူမဆန်ခြင်းကြောင့် လူသား
အခြေခံအခွင့်အရေးများပါ နစ်နာဆုံးရှုံးခြင်း ခံနေကြရသော ရိုဟင်ဂျာ
လူထုတစ်ရပ်လုံး၏ အခွင့်အရေးကို ပြန်ရယူပြီး Sister Community ဖြစ်သော
ရခိုင်လူမျိုးများ နှင့် အေးချမ်းစွာ နေထိုင်နိုင်ရန် မျက်မှောက်ခေတ်၏
ဘောင်စည်းမျဉ်း၊စည်းကမ်း နှင့်အညီကြိုးစား ရုန်းကန်ခြင်းသာ ဖြစ်ပါသည်။
Arakan တွင် ဘိုးဘွား စဉ်ဆက်နေထိုင်လာခဲ့သော လူမျိုးများသည် အမိမြေကို
Arakan ဟု သုံးနုံးလျှင် ဘယ်ဥပဒေကမှ အပြစ်ပေး အရေးယူ၍ မရပေ။ အယူဝါဒ
ကျဉ်းမြောင်းသော လူမျိုးရေးဝါဒီများကြောင့် ထိုကဲ့သို့
မဟုတ်မမှန်ရေးသားပြီး တကမ္ဘာလုံးအား မျက်စိမှိတ်၊နားပိတ်ရန် ကြိုးစားနေကြ
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းက ရခိုင်အမျိုးသားတို့ကို Arakanese ၊ ရခိုင်ပြည်ကို Arakan
မြေပုံများတွင်လဲ Arakan ဟုသာ ယနေ့ထိ Arakan နှင့် Arakanese တို့သည်
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များဖြစ်သည်၊ ဘဂါင်္လီလူမျိုးတစ်ခုသည် Arakan နှင့်ပက်သက်သော
သမိုင်းများ၊စာအုပ်များကို လိမ်ညာ ဖြန့်ချီ….။
မည်သည့် သမိုင်းဆရာကမျှ ရခိုင်အမျိုးသားတို့ကို Arakanese ဟူ၍
သုံးခဲ့သည်မရှိပါ။ Magh ဟူ၍သာ ရှိသည်။ ရခိုင်သည် Magh ၏ updated version
ဖြစ်သည်။ Arakanese ဟုဆိုလျှင် Arakan တွင်လူမျိုးအားလုံးကို
ဆိုလိုသည်။Hindu,Muslim,Buddist အားလုံးအကျုံးဝင်သည်။ မြေပုံတွင် Arakan
ကိုသုံးခြင်းသည် မဆန်းပါ…။Arakan ကိုသုံးခြင်းဖြင့် Arakan သည်
ရခိုင်လူမျိုးအတွက်ချည်းသာ ဖြစ်မသွားပါ။ယခု အချိန်အထိ ကမ္ဘာ့ပညာရှင်
မည်သူကမှ Arakan နှင့် Arakanese တို့သည် ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသာ ဖြစ်သည်ဟု
မှတ်ချက်မပေးပါ။ သိလဲမသိကြပါ။ရိုဟင်ဂျာ လူမျိုးများသည် မိမိတို့၏
ရေးရာတွင်၊ဖြန့်ချီရာတွင် ရိုဟင်ဂျာမဟုတ်သော သမိုင်းဆရာများ၏ အမြင်နှင့်
သမိုင်းဆရာ Dr.သန်းထွန်း၏အဆိုအရ (၁၄၄၂-ခု) ကျောက်စာပါ အချက်များကို
ကိုးကား၍ အာရ်ကန် မင်းများတွင် မူဆလင်ဘွဲ့ နာမည်များ ရှိခဲ့သည်။
ထိုမူဆလင် ဘုရင်များမှာ နတ်မြစ် အရှေ့ဘက် နှင့် ကုလားတန်မြစ် အနောက်ဘက်
မေယုတောင်ကြားက ရိုဟင်ဂျာတွေဖြစ်တယ်။သူတို့ အဲဒီ ဒေသမှာ နေထိုင်လာခဲ့ကြတာ
နှစ်ပေါင်းထောင်ကျော်ပြီလို့ပြောတယ်။ ပိုမိုသိလိုလျှင် ဒေါက်တာ
သန်းထွန်း-Kalya Magazine p-27,1994,August ကိုကြည့်ပါ။ထိုကြောင့်
ရိုဟင်ဂျာများသည် သမိုင်းကို လိမ်ညာဖြန့်ချီခြင်း မဟုတ်
ရခိုင်လူမျိုးများသည်သာလျှင် ရိုဟင်ဂျာ၏ သမိုင်းဖြစ်ရပ်အမှန်ကို
လက်မခံလိုခြင်းကြောင့် ဖြစ်ရပ်မှန်ကို လိမ်ညာလှည်းစားခြင်းဖြစ်သည်။
ဘင်္ဂလီလူမျိုးတို့သည် တဖြည်းဖြည်း ရခိုင်လူမျိုးတို့၏ နေထိုင်ရဒေသ၊
လယ်ယာမြေများ၊ ဥယျာဉ်ခြံမြေများ၊ ဘ၀ရပ်တည်ရာ
၀မ်းစာရှာဖွေရေးလုပ်ငန်းများ၊ သဘာဝအရင်းအမြစ်များကို ၀ါးမျိုလာသည်မှာ
ဒေသခံရခိုင်လူမျိုးများအဖို့ ဘ၀ရပ်တည်မူ မရနိုင်အောင် ဖြစ်လာနေပါပြီ…။
ရခိုင်လူမျိုးတို့၏ လူ့အခွင့်အရေးကို ကျူးကျော် ချိုးပေါက်ခံလာရသည်မှာ
အထက်ပါ မလိုတမာ ဝေဖန် ရေးသားမှုသည် တကယ်ဖြစ်ပျက်နေသာ Arakan ၏ ရိုဟင်ဂျာ
ဖြစ်ရပ်ခံစားမူနှင့် လုံးဝဆန့်ကျင်နေသည်။ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတို့
ဘိုးဘွားစဉ်ဆက်ကတည်းက ပိုင်ဆိုင် လုပ်ကိုင်လာသော လယ်ယာမြေများ၊
ဥယျာဉ်ခြံမြေများကို သိမ်းပိုက် ၀ါးမျိုးနေသည်မှာ ဘင်္ဂလားမှ ဝင်လာသော
ဘဂါင်္လီ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင် လူမျိုးများ ၊ ရန်ကုန် အင်းစိန် ကျူးကျော် ရပ်ကွက်မှ
နေရာချပေးသော ဗမာလူမျိုးများ နှင့်စစ်အစိုးရတို့ပင် ဖြစ်သည်။
၁၉၉၀ ခုနှစ် ၀န်းကျင်မှ စ၍ ရိုဟင်ဂျာ ပိုင်လယ်ယာမြေများ သိမ်းယူကာ
တဘက်နိုင်ငံမှဝင်ရောက်လာသောဗုဒ္ဓဘာသာ မော့ဂ် များအတွက် အိမ်အသင့်
လယ်အသင့် မြေအသင့် ရိုဟင်ဂျာများက တည်ဆောက်ပေးနေရသည်။ ဥပမာ
မောင်တောမြို့ တောင်ပိုင်း နှင့် မြောက်ပိုင်းတွင် ထိုကဲ့သို့ စံပြ
ကျေးရွာများကို တွေ့ရှိရမည်ဖြစ်သည်။မောင်တောမြို့၊မြို့မ ကညင်တန်းရှိ
မူဆလင် ဘာသာရေး မောရ်ကောစ် ဗလီ ကျောင်းကြီးကို ဖျက်ဆီး၍ မီးသတ်တပ်ဖွဲ ဌါန
အဖြစ်အသုံးပြုနေသည်။ ထိုဗလီကျောင်းကြီး၏ Mehrab ကို အိပ်သာအဖြစ်
သုံးနေသည်။ မောင်တောမြို့ အထက်တန်းကျောင်း အနောက်ဘက်ရှိ ရိုဟင်ဂျာ
အိမ်ခြံများကို သိမ်းပိုက်ယူခဲ့သည်။ ဘူးသီးတောင်မြို့မှ
မောင်တောမြို့သို့ အ၀င်ဝတွင် ရှိသော ရိုဟင်ဂျာပိုင် လယ်မြေများကို
သိမ်းယူပြီး ဘုရားတည်ခဲ့သည်။ အလယ်သံကျော်မှ မြို့မ ကညင်တန်း အ၀င်တွင်
ဘင်္ဂလားဒေ့ခ်ျ ဘုန်းကြီးကျောင်းတိုက်ကို ရိုဟင်ဂျာတို့၏ လယ်မြေများပေါ်တွင်
တဖန် စစ်တွေမြို့ ယဉ်ကျေးမှု ပြတိုက်တည်ရှိရာ နေရာသည်
ရိုဟင်ဂျာမူဆလင်တို့၏ အိမ်ခြံမြေဖြစ်သည်။ စစ်တွေမြို့မ ဗလီကြီး၏
မြောက်ဘက်တွင် မီးလောင်ရာမှ ဖျက်ဆီး သွားသော ရိုဟင်ဂျာပိုင်
အိမ်ယာမြေများကို သိမ်းယူပြီး လူမျိုး ရခိုင်များအတွက် ဆိုင်ခန်း၊
ယဉ်ကျေးမှုပြတိုက် စသည် တို့ကိုတည်းဆောက်ပေးခဲ့သည်။
ထိုမှတစ်ပါး ၁၉၉၄-ခုနှစ်တွင် မင်းပြား နှင့် မြောက်ဦးမြို့နယ်များမှ
ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများ၏ အိမ်ခြံမြေယာများကို သိမ်းယူးပြီး
ထိုရိုဟင်ဂျာလူမျိုးများကို မောင်တောမြို့သို့ အိုးမဲ့အိမ်မဲ့ ဘ၀သို့
ပို့ဆောင်ပေးခဲ့သည်။ ထိုမိသားစုမျာားကို ယ္ခုထက်တိုင်
မောင်တောမြို့တောင်ပိုင်းရှိ ကျေးရွာများတွင် တွေ့နိုင်ပါသည်။
အထက်ပါ အချက်အလက်များသည် ခိုင်လုံသော အထောက်အထားများဖြစ်ပြီး အများစုထဲမှ
အထက်ပါ တင်ပြချက်များကို ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်
လူအခွင့်အရေးချိုးဖောက်ခံရသူများမှာ ရခိုင်တွေလား ရိုဟင်ဂျာတွေလား
သိသာနိုင်ပါသည်။အစိုးရ နှင့် ရခိုင်လူမျိုးတို့၏ နေ့စဉ်မပြတ် ရက်စက်
ချုပ်ချယ်မှုကို ခံနေရသူများမှာ ရိုဟင်ဂျာများပင်ဖြစ်သည်။ ရိုဟင်ဂျာ
တို့၏ နေထိုင်ရဒေသ၊ လယ်ယာမြေများ ဥယျာဉ်ခြံမြေများ ကိုသိမ်းယူနေသူများမှာ
ရခိုင်လူမျိုးများနှင့် စစ်အစိုးရတို့ပင်ဖြစ်ကြသည်။ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးတို့
ဘ၀ရပ်တည်မူ မရနိုင်အောင် ချုပ်ချယ် ကန့်သက် ဖိနှိပ် ရက်စက်နေသူ များမှာ
ရခိုင်နှင့် စစ်အစိုးရတို့ပင် ဖြစ်ကြသည်။
ရခိုင်ပြည်ရှိ ဗုဒ္ဓဘာသာ အဆောက်အအုံများသည် ကမ္ဘာ့ ယဉ်ကျေးမှုပိုင်
အဆောက်အအုံးများ ဖြစ်ပါသည်။လူရမ်းကား လူလိမ် ဘင်္ဂလီတစ်ချို့ကြောင့်
ရခိုင်ပြည်ရှိ ဗုဒ္ဓသာသနာ အဆောက်အအုံးများသည် ပျောက်ကွယ်ရတော့မည်…။
ယခုမျက်မှောက်ကာလတွင် မည်သည့် ရခိုင်ဘာသာရေး အဆောက်အအုံးများကို တစ်ခြား
ရခိုင်မဟုတ်သော လူမျိုးများမှ ဖျက်ဆီးခြင်း မရှိပါ။ ရခိုင်လူမျိုးများ
နှင့် စစ်အစိုးရ ပူးပေါင်း၍ ရိုဟင်ဂျာလူမျိုး အိစ္စလာမ်ဘာသာဝင်တို့၏
ဥပမာပြရလျှင် မောင်တောမြို့ မြို့မကညင်တန်းရှိ မေရ်ကောစ်
ဗလီကြီး၊မြောက်ပိုင်း နှင့် တောင်ပိုင်းရှိ
ဗလီကျောင်းများ၊မြောက်ဦးမြို့ရှိ စန္ဒီခန် ဗလီကြီးများကို စစ်အစိုးရ
အဆက်ဆက်က ပျက်စီးပြီး ရိုဟင်ဂျာ သမိုင်းဝင် အမှတ်အသားများကို တိမ်ကော
မှေးမှိန် သွားအောင် ပြုလုပ်လျှက်ရှိနေသည်။ယ္ခု စစ်တွေမြို့ လောကနန္ဒာ
ဘုရားတည်ရှိရာ နေရာသည်လည်း ရိုဟင်ဂျာမူဆလင်များ၏ အိမ်ယာမြေများ၊
ဗလီကျောင်းများကို ဖျက်ဆီးသိမ်းပိုက်ပြီး ဘုရားတည်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
သမိုင်းဝင်သာသနာ့ အဆောက်အအိုများ ပျောက်ကွယ်အောင်
ထို့ကြောင့် အနည်းဆုံး နှစ်ပေါင်း (၁၂၀၀) ခန့်ကပင် Arakan တွင်ရှိနေသော
ရိုဟင်ဂျာများသည် Arakanese Rohingya ဟုမသုံးနှိင်လျှင်
ရခိုင်များသည်လည်း Arakanese ဟုမသုံးနိုင်ပေ။ ရိုဟင်ဂျာ သည်ဘင်ဂါလီ
ဖြစ်လျှင် ရခိုင်များသည် သမိုင်းအထောက်အထားများအရ ရိုဟင်ဂျာ ထက်စော၍
Indian ကုလားဘင်ဂါလီ ဖြစ်သည်။
အထက်ပါ အချက်အလက်များကို ထောက်ရှုခြင်း အားဖြင့် ရခိုင်တိုင်ရင်းသားများ
တိုးတက်ရေးပါတီမှ ထုတ်ပြန်သော ကြေငြာချက်သည် အခြေအမြစ် မရှိ၊လူမျိုးရေး
မုန်းတီးမူဝါဒီများ၏ လုပ်ရပ်သာဖြစ်ကြောင့် သက်သေပြအပ်ပါသည်။
Rohingyas are not British era settlers, summery of the facts from the
Rohingyas of Arakan,AFK Jilani
A Short History of Rohingyas and Kamans of Burma, M.A Tahir Ba Tha
(translated by A.F.K Jilani, edited by Mohd. Ashraf Alam)
Posted in: မျိုးချစ်မောင်
အာရိယန် မျိုးနွယ်စုဝင် ရိုဟင်ဂျာတိုင်းရင်းသားများ နေရာမှာ တိဗက် မြန်မာ မျိုးနွယ်စုဝင် ရခိုင်တို့က သူတို့ဟာ အာရိယန် မျိုးနွယ်မှ ဆင်သက်လာသလိုလို သမိုင်းမှန်ကို ဖုံးကွယ်၍ အာရိယန် မျိုးနွယ်စစ်စစ် တွေဖြစ်ကြတဲ့ ရိုဟင်ဂျာတို့နေရာကို လိမ်လည်ပြီး ဝင်ရောက် ယူထားတာကို လူမိသွားသဖြင့် အေးချမ်းတို့ အဖွဲ့က အရှက်ပြေ ဝါးလုံးရှည်နဲ့ လိုက်ရမ်းနေတာပါ။
အာရိယန်လူမျိုးစုမှ ဆင်သက်လာသူ လူမျိုးစုစစ်စစ် ရခိုင်လား ရိုဟင်၈ျာလားဆိုတာ ရှင်းလင်းသွားအောင်
အာရိယန်လူမျိုးများသည် ယင်းတို့နေထိုင်ရာ ဖြစ်သော ရုရှတောင်ပိုင်းဒေသမှ အိန္ဒိယတိုက်သို့ ဘီစီ ၁၅၀၀
ယင်းအာရိယန်လူမျိုးတို့သည် ပန်ဂျပ်ကို ဦးစွာတိုက်ခိုက် သိမ်းပိုက်ပြီး တဖြေးဖြေးဂင်္ဂါမြစ်ဝှမ်းသို့ ပြန့်နှံ့သွားကြသည်။
သူတို့သည် တိုင်းရင်းသား အိန္ဒိယလူမျိုးများနှင့်ရောနှောသွားကြသည်။ ယင်းကာလမှစ၍ အိန္ဒိယတိုက်သားများကို
အင်ဒိုအာရိယန်လူမျိုးဟူ၍ခေါ်တွင်ခဲ့လေသည် ဟု ဦးစံသာအောင် ၁၉၇၄ခုနှစ်ထုတ် ခြောက်ရာစု ဗျည်းနှင့်သရများ စာအုပ်တွင် ရေးသားထားသည်။
တဖန် အေဒီ (၉)ရာစု အစောပိုင်းကာလများက ပေါ်ပေါက်ခဲ့သော ဓညဝတီနှင့်ဝသာလီ ပဒေသရာဇ် နိုင်ငံများသည်။
အိန္ဒိယတိုက်ငယ်နေ အိန္ဒိယံလူမျိုးများ၏ မင်းနိုင်ငံများသာဖြစ်ပြီး အဲဒီခေတ် အဲဒီကာလတုန်းက ရခိုင်ဆိုတာ အစအနတောင် မရှိသေးပါ။
ဝေသာလီခေတ် ဝေသာလီတိုင်းပြည်မှပြည်သူများသည် ယခုရခိုင်ပြည်နယ်က ရိုဟင်ဂျာများပင်ဖြစ်သည်။
အေဒီ(၉)ရာစု နောက်ပိုင်းမှ အရှေ့ဘက်မှ တိဗက်မြန်မာ အနွယ်ဝင်များ အုပ်စုလိုက် တစ်သုတ်ပြီး တစ်သုတ် ဝင်ရောက်လာခြင်းဖြင့် (၁၀)ရာစု အကုန် (၁၁)ရာစု အစပိုင်လောက်မှာ ဝေသာလီနိုင်ငံ ပျက်သုဉ်းပြီး
တိဗက်မြန်မာ အနွယ်ယင်အုပ်စုတို့ကြီးစိုးသော လေးမျိုးခေတ်ဟူ၍ ဖြစ်လာခဲ့သည်။
(၈)ရာစု ဝေသာလီခေတ် မဟာစန္ဒြာမင်းလက်ထက်တုန်းက ဝေသာလီတိုင်းပြည်သူ တိုင်းပြည်သားများသည်
ဟိန္ဒူဘာသာနှင့်သီဝနတ်ကိုးကွယ်သူများဖြစ်ပြီး ယင်းလူများသည် အာရိယန်လူမျိုးမှ ဆင်သက်လာသူများဖြစ်
သည်ဟူ၍ ကမ္ဘာ့အထင်ကရ သမိုင်းဆရာများကအဆိုရှိကြသည်။
ရခိုင်လူမျိုးဆိုတာ အေဒီ(၉)ရာစုနှင့်(၁၀)ရာစုကြားကာလကမှ အရှေ့ဘက်မှ ဝင်ရောက်လာသူ တိဗက်မြန်မာ အနွယ်ဝင်များမှဆင်သက်လာသူများဖြစ်ပြီး ရိုဟင်ဂျာလူမျိုးဆိုတာ အာရိယန်မျိုးနွယ်နှင့်ရောနှောရာမှ ခေါ်တွင်
အာရိယန်လူမျိုးများ ရောနှောရာမှ ဖြစ်လာတဲ့ အင်ဒိုအာရိယန် လူမျိုးဆိုတာ အိန္ဒိယတိုက်သားများကို ခေါ်ဆိုခြင်း ဖြစ်ပြီ ယင်းလူမျိုးများနှင့် တူညီသူများသည် ရိုဟင်ဂျာများသာဖြစ်သည်။ ရုပ်လက္ခဏာအာဖြင့်လည်းကောင်း
ဘာသာစကားအားဖြင့်လည်းကောင်း အိန္ဒိယတိုက်ငယ်သား အာရိယန်မျိုးနွယ်မှားနှင့်တူညီသူများမှာ ရိုဟင်ဂျာ
လူမျိုးနှင်း၎င်းတို့ပြောသော ဘာသာစကားသာလျှင် အာရိယန်စကားဖြစ်ပြီး ရခိုင်လူမျိုးတို့ ပြောသောဘာစကား
နှင့်စာပေသည် မြန်မာစကား မြန်မာစာနှင့် အလွန် အလွန်မှ နီစပ်နေပြီး ရုပ်လက္ခဏာ အာဖြင့်ကြည့်ပါကလည်း
တိဗက်မြန်မာမျိုးနွယ်ဝင်များနှင့် တူညီနေသည်ကို ကြည့်ခြင်းဖြင့် ရခိုင်လူမျိုးဆိုတာ အေဒီ(၉)ရာစုလောက်က
ရခိုင်ပြည်နယ်ဘက် ပြောင်းရွှေ့လာသူ တိဗက်မြန်မာအနွယ်ဖြစ်ကြောင်း လုံဝသံသယဖြစ်စရာမလိုအောင်
အေဒီ (၁၄) (၁၅)ရာစုလောက်မှာမှ ရခိုင်စာဆိုတာ ပေါ်ပေါက်လာခြင်းဖြစ်သည် ဟု သမိုင်းဆရာများရဲ့ 
အဆိုရှိခဲ့သည်။ယင်းမတိုင်းမီ ကာလတုန်းက ဝေသာလီခေတ် တိုင်းသားများဖြစ်သည် ယခုရိုဟင်ဂျာတို့၏
စာပေကိုသာ အသုံးပြုကြောင်း ကျောက်စာ ပေစာ ခေါင်းလောင်းစာတို့က သက်သေခံနေပါသည်။
ဝေသာလီပြည်သူများသည် (၈)ရာစုမှ စ၍ သင်္ဘောပျက်ရာမှ အကူညီရယူရန် ကုန်ပေါ် တက်လာသော အာရဗ်တို့၏ သာသနာပြုဖိတ်ခေါ်ရာမှ အစ္စလာမ်းဘသာကို လက်ခံယူခြင်း ၊ အစ္စလာမ်းဘာသာသို့ ကူးပြောင်းလာရာမှ စ၍ ယင်းမတိုင်မီက သီဝနတ်ကိုးကွယ်မှုများနှင့်ဟိန္ဒူဘာသာကိုကွယ်မှုများ ၎င်းဘာသာများနှင့်
သက်ဆိုင်သော ကိုးကွယ်မှု ယဉ်ကျေးမှု စာပေများပါ အားလုံး တရှိန်ထိုးပြောင်းလဲလာသဖြင့် မူလက ရှိခဲ့သော
ဝေသာလီတိုင်းသူ ပြည်သားတို့၏ ဓလေ့ရိုးရာ ကိုးကွယ်မှု စာပေ အားလုံးကို အာရဗ်တို့ဘာသာ စာပေ
ယဉ်ကျေးမှု ဓလေ့ရိုးရာများက အစားထိုးဝင်လာ နေရာယူလာသဖြင့် ဝေသာလီပြည်သား အမြောက်အများ သည်လည်း အစ္စလာမ်းဘာသာကိုးကွယ် ယုံကြည်သူများဖြစ်လာခဲ့သည်။
(၉)ရာစုမှဝင်လာသူ တိဗက်မြန်မာအနွယ်ဝင်များသည် ဗုဒ္ဓာသာဝင်များဖြစ်သည် ယင်းတိဗက်အနွယ်ဝင်များက
လေးမျိုးခေတ်ကို ထုထောင်ပြီး ယခင်ကရှိခဲ့သော ဝေသာလီတိုင်း ပြည်သူ ပြည်သားတို့၏ ကိုးကွယ်မှုဆိုင်ရာ
ဘုရားရုပ်တုတော်နှင့်ဘာသာရေးဆိုင်ရာ ယဉ်ကျေးမှုများကို မိမိတို့ယဉ်ကျေးများဟု ယခုအခါပြောနေသူ
ရခိုင်လူမျိုးများဟာ (၉)ရာစုကမှ ရခိုင်ဒေသသို့ အရှေ့ဘက်မှ ဝင်လာသူ တိဗက်မြန်မာအနွယ်များသာ ဖြစ်တယ်
ဒီတော့ ရိုဟင်ဂျာတွေက အာရိယန်လူမျိုးအစစ်လား ရခိုင်တွေက အာရိယန်လူမျိုးအစစ်လား